सोलुखुम्बु : गार्मा मा.वि.को बाली विज्ञान ओजेटीको जिम्मा कम्पनीले लियो - Rahashya Khabar Online News Portal Rahashya Khabar Online News Portal
सोलुखुम्बु : गार्मा मा.वि.को बाली विज्ञान ओजेटीको जिम्मा कम्पनीले लियो
प्रकाशित मिति: 13 April, 2021 7:49 am
सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बुको गार्मा माध्यमिक विद्यालयको कृषि बाली विज्ञान तर्फको ओजेटी तालिमको जिम्मेवारी कर्माग्रुप अफ कम्पनीज् काठमाण्डौले लिएको छ । प्राविधिक धार कृषिका विद्यार्थीले कक्षा १२ पछि लिनुर्ने ६ महिने ओजेटीको जिम्मेवारी कम्पनीले ग्रहण गरेको विद्यालयले जनाएको छ ।
जसका लागी कम्पनी र विद्यालय विच दोहोरो सम्झौता नै गरिएको प्राधानाध्यापक विनोदसिहं तामाङले जानकारी दिनुभयो । सम्झौतापत्रमा विद्यालयको तर्फबाट ब्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा र कम्पनीको तर्फबाट प्रबन्धक निर्देशक सुरेश गुरुङले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
ओजेटी गर्ने विद्यार्थीलाई खाना, बस्न, यातयात सुविधा सहित थप मासिक ८ हजार रुपैँयाका दरले सेवासुविधा उपलब्ध गराउने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । साथै कम्पनीले ईन्ट्रान्समा नाम निकाल्न सफल विद्यार्थीहरुलाई वि.ए.सी.ए.जी (एग्रिकल्चरमा ब्याचुलर) का लागी छात्राबृद्धिको समेत ब्यवस्था गर्ने ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्राविधिक धार कृषिमा माथिल्लो तह अध्ययनका लागी समेत कम्पनीले तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने छ । विद्यार्थीको रुची अनुसार फर्म तथा कृषि सम्बन्धी मार्केटिङमा काम लगाउन आफुहरु तयार रहेको कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशक सुरेश गुरुङले बताउँनुभयो ।
कृषि बाली विज्ञानको क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई रिसर्ज बेसमा रहेर काम गराउने उहाँको प्रतिबद्धता छ । गार्मा मा.विबाट यस बर्ष ओजेटीमा ३० जना विद्यार्थी सहभागी हुने विद्यालयले जनाएको छ । उनीहरुलाई कक्षा १२ को परिक्षा सम्पन्न गराएर आगामी असार ४ गतेपछि पठाईने प्रधानाध्यापक तामाङले बताउँनुभयो ।
वि.स २०७० सालबाट कक्षा ९ देखि कृषि बाली विज्ञान सुरु गरेको विद्यालयले २०७४ सालमा कक्षा १२ को पहिलो ब्याज विद्यार्थी उत्पादन गरेको थियो । त्यस यता विद्यालयले ओजेटीका लागी जिल्ला बागबानी केन्द्र फाप्लु सहित सुनसरीको तरहराका विभन्नि फममा पठाउँदै आएको थियो ।
आगामी (चौँथो) बर्षबाट कम्पनीले जिम्मा लिएसँगै उत्कृष्ट विद्यार्थी उत्पादनमा सहयोग पुग्ने विद्यालयको विश्वास छ । हाल उक्त विद्यालयमा कक्षा ९ देखि १२ सम्ममा ९० जना विद्यार्थी प्राविधिक धार कृषि बाली विज्ञान अध्ययन गरिरहेका छन् ।
गार्मा मा.वि. प्राविधिक धार अन्र्तगत कृषि बाली विज्ञान सुरु गर्ने जिल्ला कै पहिलो विद्यालय हो । नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तगत सञ्चालित कृषि बाली विज्ञान कक्षा आठ उर्तिण गरेकाले अध्ययन गर्न पाउने विद्यालयले जनाएको छ ।
असाहाय तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई निशुल्क होस्टल
गार्मा माध्यमिक विद्यालयमा सहयोगी संस्था हिमालयन क्यर फाउन्डेसन मार्फत होस्टल पनि सञ्चालन गरेको छ । जर्मनी संस्था क्यर फाउन्डेसनको सहयोगमा सञ्चालित होस्टलमा असाहाय तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई निशुल्क खान, बस्न सहितको सुविधा प्रदान गर्दै आएको विद्यालयले जनाएको छ ।
हाल होस्टलमा ६५ जना विद्यार्थी बस्दै आएको बिद्यालय ब्यवस्थापन समिति अध्यक्ष शेर्पाले जानकारी दिनुभयो । गरिब तथा असाहायका कारण कुनै पनि जेहेन्दार विद्यार्थी शिक्षाबाट बञ्चित हुन नपरोस भन्ने हेतुका साथ आफुहरुले होस्टल सुरुवात गरेको हिमालयन क्यर फाउन्डेसनका डाईरेक्टर तथा गार्मा माध्यमिक विद्यालयका ब्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले बताउँनुभयो ।
होस्टल सञ्चालन हुनु गरिब, असाहाय तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागी बरदार सावित भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक विनोदसिहं तामाङले बताउँनुभयो ।
विद्यार्थीद्धारा उत्पादित तरकारीको विरुवा कृषकलाई निशुल्क वितरण
गार्माका कृषकहरुलाई तरकारीको विरुवा निशुल्क वितरण गरिएको छ । हिमालयन क्यर फाउन्डेसनलको आर्थिक तथा कर्मा ग्रुप अफ कम्पनीज्को प्राविधिक सहयोगमा विद्यार्थीहरुबाट उत्पादित तरकारीको विरुवा निशुल्क वितरण गरिएको हो ।
कृषि बाली विज्ञान अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले प्रयोगात्मक रुपमा उत्पादन गरेका विभिन्न तरकारीको विरुवा गार्माका २२ जना कृषकलाई वितरण गरिएको गार्मा मा.वि. का विद्यालय ब्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले जानकारी दिनुभयो ।
विद्यार्थीहरुले प्रयोगात्मक रुपमा उत्पादन गरिरहेको तरकारीका अन्य विरुवाहरु निशुल्क वितरण गरिने अध्यक्ष शेर्पाले बताउँनुभयो ।
कर्मा ग्रुुप अफ कम्पनीको टिमले गार्मामा नयाँ प्रजातीको १० प्रकारको आलु र ६ प्रकारको मकैको नमुना बिउ परिक्षण गरिरहेको छ । कम्पनीबाट डा.सुचित श्रेष्ठको नेतृत्वमा आएको टोलीले उत्कृष्ट उत्पादन दिने विउ छनोट गरि कृषकलाई वितरण गरिने कम्पनीले जनाएको छ । यो परिक्षण जिल्लामै पहिलो भएको कम्पनीको दाबी छ ।